को सबै भन्दा राम्रो iPhone र iPad खेल 2015 - समाचार नियम
को सबै भन्दा राम्रो iPhone र iPad खेल 2015
शीर्षक यो लेख “2015 को उत्कृष्ट iPhone र iPad खेल” स्टुअर्ट Dredge द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 24 डिसेम्बर मा theguardian.com 2015 08.00 UTC
आइओएस खेलाडीहरूलाई रुचि लागि साँच्चै खराब थियो 2015, हरेक हप्ता जारी कम्तिमा दुई वा तीन उत्कृष्ट नयाँ खेल संग. स्वतन्त्र विकासकर्ताहरूले विचार संग fizzing थिए, तिनीहरूले अक्सर तिनीहरूलाई आफ्नो भाग्य बनाउन संघर्ष पनि.
यस पुग्न एक विशाल longlist तल साँघुरो गर्न 25 यहाँ विशेष खेल केही प्रभावशाली शीर्षक बाहिर squeezing संलग्न, Skylanders Superchargers र रियल बक्सिङ देखि2ज्योति आक्रमण गर्न, Letterpad र तपाईं एक नाउ निर्माण गर्नु पर्दछ.
यहाँ अन्तिम छ 25: को संरक्षकका छान्ने 2015 आइओएस खेल मा. र, हो, त्यहाँ छुट्टै तपाईं यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भनेर एन्ड्रोइड खेल राउन्डअप छ.
25. PewDiePie: को Brofist को पौराणिक कथा
संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय YouTubers को एक आधारित एक खेल एक नगद-मा लागि एक नुस्खा जस्तै लाग्न सक्छ, तर यो तर केहि थियो. को Brofist को पौराणिक कथा खेल इतिहासमा थाह सन्दर्भहरू धेरै संग राम्ररी तैयार एक platformer छ. यो पनि तपाईं आफ्नो वालेटमा भन्दा आफ्नो कौशल भर बनाउँछ (मा-अनुप्रयोग खरिदका लागि) प्रगति गर्न.
24. स्टार वार्स: हीरो को ग्यालेक्सी
हरेक महिना मा 2015 नयाँ स्टार वार्स मोबाइल खेल ल्याउन देखिन्थ्यो, ती सबै राम्रो. यो प्रशंसक भन्दा relish भन्ने छ: स्टार वार्स को विभिन्न eras देखि वर्ण सङ्कलन मा एक राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएको कार्य एक जोर संग खेल, ब्रह्माण्डको मा यसलाई संघर्ष र त्यसपछि टोली उनलाई गठन गर्न.
23. गाढा इको
हामी यस्तो अघि iOS मा पापा Sangre रूपमा अडियो-मात्र खेल देखेका छौँ, तर यो फरक छ, "भिजुएलाइज्ड ध्वनि" तपाईं बनाउन ध्वनि आधारित यसको वातावरण देखाउन प्रयोग. ती ध्वनि बाहेक पनि आकर्षित … राम्रो, हामी यसलाई खराब छैन. तर यो रात अबेर मात्र खेल्न चाहनुहुन्छ छौँ एक खेल छैन - यो तपाईं आफ्नो सोफा बाहिर कूद हुनेछ.
"हामीलाई थाहा छ. यो धेरै जस्तो देखिदैन. तर हामी यो एक धेरै राम्रो पहेली खेल भन्ने प्रतिज्ञा,वर्ष वाल्क र उपकरण को - "विकासकर्ता Simogo भने6ख्याति - र तिनीहरूले सही. स्प्ल-टी धेरै सरल देखिन्छ: तपाईं आधा यसलाई विभाजित गर्न स्क्रिनमा ट्याप गर्नुहोस् (र, फेरि आधा, आदि). तर तपाईंले आफ्नो रणनीति विकास सुरु, यो तपाईं बेकारी.
तपाईं गोलीले सबैतिर streaking असल गोली मार-'em-अप प्रेम भने, तपाईं AirAttack प्रेम छौँ 2. यसको दोस्रो विश्वयुद्धको विषय तपाईं मार्फत उडान देख्नुहुन्छ 22 शूटिंग स्तर र विस्फोट, शत्रु सेना, र, जबकि शानदार ग्राफिक्स खेल मुख्य बिक्री बिन्दु हो, यसको गेमप्ले शैली को प्रशंसक लागि reassuringly चुनौतीपूर्ण छ.
AirAttack2तस्वीर: पीआर
20. स्पाइडर: को Shrouded चन्द्रमा को अनुष्ठान
2009 का लागि sequel (अझै पनि बाहिर जाँच लायक) स्पाइडर: Bryce Manor रहस्य, यो थप आठ-खुट्टे पहेली-हल छ, तपाईं कीरा फँसाने र एक अलौकिक कथा uncovering एक त्यागेर मकान अन्वेषण रूपमा. एक प्रवृत्ति को भाग (Prune जस्तै र बिजुली घर मुनि खेल साथ) लागि कम frenetic मस्तिष्क-stretching.
19. को बिजुली घर मुनि
यो एक धेरै फरक खेल हो, तर तपाईंलाई स्मारक उपत्यका प्रेम भने 2014, त्यसपछि तल बिजुली आफ्नो अर्को तय हुन सक्छ. यो एक प्रकाशस्तम्भ तल सेट गर्न पहेली खेल हो, जहाँ तपाईं आफ्नो हराएका बाजे आफ्नो जवान नायक मार्ग पत्ता लगाउन यांत्रिक पाङ्ग्रा बारी छ. यो उज्यालो र रंगीन छ, र आफ्नो पार्श्व सोचाइ सीप परीक्षण.
Downwell एक स्पेक्ट्रम खेल जस्तो देखिन्छ, र पनि एकदम जस्तो खेल्छ - स्क्रिनमा बटन यसको कार्य नियन्त्रण गर्न संग पूरा. यद्यपि खेल आफ्नो आकर्षण गर्न अधिक मान्छे प्रशस्त जित्यो छ, तपाईं तल प्रवेश रूपमा राम्रो तरिकाले धन लागि देख. गहिराई (Pun आंशिक इरादा) तपाईं बाटोमा सङ्कलन कि हतियार र शक्ति-अप आउँछ.
17. स्टिक क्रिकेट 2
खेलकुद सिम रूपमा धेरै एक ताल-कार्य खेल, स्टिक क्रिकेट2तपाईं विरोधीहरूले एक सीमा विरुद्ध चौका र छक्का hoicking छ, पूर्ण खोसिएर नाङ्गै-तल नियन्त्रण र रेशमी-चिल्ला एनिमेशन संग. iOS मा सबै भन्दा राम्रो क्रिकेट खेल, तर यसको मेकानिक्स यसलाई थप आकस्मिक प्रशंसक साथै cricketing buffs अपिल गर्नुपर्छ.
16. नतीजा आश्रय
को अन्तसम्ममा 2015, नतीजा प्रशंसक नतीजा खेल्दै थिए4आफ्नो कन्सोल मा. तर यसको रिलिज सम्म, तर पनि यसको आफ्नै सही मा एक शीर्ष निशान खेल - मोबाइल खेल नतीजा आश्रय आफ्नो भरण-मा तय थियो. खेल तपाईं एउटा पोस्ट-apocalyptic आश्रय भूमिगत चलिरहेको देख्नुहुन्छ, एक जस्तै यस Sims विकिरण-dodging.
15. कक्ष तीन
दुवै अघिल्लो कोठा खेल उत्कृष्ट टचस्क्रीन पहेली खेल रहन, र श्रृंखला मा तेस्रो जस्तै राम्रो थियो. यसको predecessors जस्तै, यो शारीरिक पहेली केन्द्रित, तपाईं स्पिन रूपमा, ट्याप गर्नुहोस् र आफ्नो रहस्य बाहिर आंकडा विभिन्न कलाकृतिहरू मा जूम. हाल आइओएस उपकरणको दृश्य आवाज निकाल्नु लागि सिद्ध प्रदर्शन, तर एउटा ठूलो खेल पनि.
14. यो युद्ध बारुद को
आफ्नो भावना राम्रो जा-माथि दिनेछु अर्को खेल, यो कब्जाको अन्तर्गत शहर मा नागरिकहरु को दृष्टिकोणबाट प्ले एक युद्ध खेल हो. आफ्नो hideout निर्माण र खतरनाक शहर सडकमा foraging बीच तपाईं आफ्नो समय विभाजित छौँ, केही कठिन निर्णय आफ्नो सुरक्षा अन्तर्गत मानिसहरूले बनाइने गर्न.
13. Shooty आकाश
अन्यथा कुराहरू Crossy रोड विकासकर्ताहरूले अर्को गरे रूपमा चिनिन: reinventing Pac-पुरुष बाहेक, तिनीहरूले यो rapidfire गोली मार-'em-अप गरे. यो Crossy रोड समान गतिशीलता प्रयोग: तपाईं नियमित मर्न छौँ, तपाईं उन्नति रूपमा तर नयाँ वर्ण अनलक हुनेछ. आकर्षण प्रशस्त, र refreshingly यसको अनुप्रयोग खरिद संग unaggressive.
12. भोकभोकै छैन: पकेट संस्करण
यस सूचीमा मुश्किल खेल को - जसरी यसको प्रारम्भिक चरणमा - तर एक राम्रो संग संरक्षित लायक. तपाईं एक उजाडस्थानमा त्यागेर हेर्नुहुन्छ भोकभोकै छैन, खाना पाउन भइरहेको, पाल र जंगली जनावर द्वारा scoffed जोगिन. को अन्वेषण-र-शिल्प शैली मा एक आविष्कारशील र विचलित तुल्याउने मोड.
11. Minecraft: कथा मोड
एउटा कथा साहसिक लागि विकासकर्ता गप्पी खेल अप समूहमा Minecraft निर्माता Mojang गरेको निर्णय गलत भएको हुन सक्छ, तर यसको सट्टा यो एक विजयोल्लास सफलता थियो. अर्को खेल संसारको मा सेट एक खेल एक बिट मेटा लाग्न सक्छ, तर वर्ण, आवाज अभिनय र प्रशंसक-केन्द्रित सन्दर्भहरू यो उपचार गरे.
Minecraft: कथा मोड
10. Rayman साहसिक
पुराना कन्सोल मताधिकार Rayman पनि सबैभन्दा भरपर्दो मोबाइल खेल ब्रान्डहरु एक भएको छ, अद्भुत टचस्क्रीन शीर्षक को एक श्रृंखला संग. Rayman साहसिक को लकीर तोड थिएन, पनि यसको freemium संरचना संग: कहिल्यै व्यर्थ गराउनु भनेर नियन्त्रण संग colorfully-cartoonish मंच कार्य.
9. अल्टो गरेको साहसिक
हामी Snowboarding र iOS मा अघि खेल स्कीइंग देखेका छौँ, तर कहिल्यै रूपमा सुंदर-देख अल्टोपराग्वे गरेको साहसिक रूपमा. यसको जूम-बाहिर क्यामेरा आफ्नो स्नोबोर्डर मा रूपमा ध्यान-तैयार पृष्ठभूमि मा धेरै रूपमा ध्यान राख्दछ, भौतिकी संग बस तपाईं zip रूपमा सही महसुस (र जम्प) को undulating परिदृश्य मार्फत.
8. भाइहरूलाई: दुई छोरा एक कथा
यो मूल पीसी र कन्सोल संस्करण पुरस्कार दर्जनौं जित्यो छ, र deservedly त. यो आफ्नो बुबाको जीवन सुरक्षित गर्ने प्रयास भाइहरूले एक जोडी को आफ्नो कथा संग wringer मार्फत राख्दछ. चलाख नियन्त्रण र हराभरा दृश्यहरू तपाईंलाई आउनुहुनेछ, तर यो तपाईं प्ले राख्न भन्ने कथा छ.
7. WARNIERS ईेडी गरेको मा पाँच रातों 4
WARNIERS ईेडी गरेको श्रृंखला मा पांच रातों एक समर्पित fanbase निर्माण गरेको छ, र यो अन्तिम खेल तिनीहरूलाई निराश थिएन. फेरी पनि, तपाईंलाई साँच्चिकै-डरावना animatronic शत्रुहरू संग लडाई गरिरहनुभएको, कार्य राउन्ड यो समय बाहेक आफ्नो आफ्नै घरमा सारे छ. मोबाइल का प्रमुख अस्तित्व-त्रास श्रृंखला मा अझै सबै भन्दा राम्रो खेल.
6. Alphabear: शब्द पहेली खेल
यसको सुरुवात पछि लगभग चार वर्ष, तीन टाउन सबै भन्दा राम्रो मोबाइल puzzlers को एक रहिरहन्छ. मा 2015, यसको विकासकर्ता एक उत्तिकै-लत शब्द खेल गरे, Alphabear, जो तपाईं अंक कमाउन स्क्रयाबल-जस्तो टाइल्स शब्दहरू वर्तनी देख्नुहुन्छ - र कार्टून भालू निर्माण. सही स्नान-मा स्नान-बाहिर मोबाइल खेल.
5. लारा ाफ्ट जाओ
यो एक प्रसिद्ध खेल अनुहार star सक्छ, तर यो कुनै lackluster spinoff थियो. लारा ाफ्ट जाओ - यो अघि Hitman जाओ जस्तै - एक रक-ठोस पहेली-साहसिक इन्जिन लागू एक परिचित ब्रान्ड हो. लारा ाफ्ट जाओ आफ्नो मानसिक कौशल मा squarely ध्यान राख्दछ, पूर्ण-गठन दृश्यहरू को छ अध्याय अन्वेषण गर्न साथ.
कहिल्यै रोलप्लेइङ खेल प्रेम जसले कसैको लागि सुन्दर विचार (आरपीजी) विधा. Evoland एक शीर्ष-तल रूपमा सुरु, मोनोक्रोम साहसिक तर बिस्तारै विधा इतिहासद्वारा आफ्नो बाटो काम गर्दछ, whizzy वास्तविक समय 3D लड्दै संग समाप्त. एक gimmick? धन्न यो एक अवशोषित खेल द्वारा जगेडा थियो.
3. फुटबल प्रबन्धक टच 2016
त्यहाँ अब धेरै वर्ष को लागि फुटबल प्रबन्धक को उत्कृष्ट मोबाइल संस्करण भएको, तर 2015 ट्याब्लेट र व्यवस्थापन को डेस्कटप संस्करण बीच अंतर साँघुरो पनि थप सिम देखे. छैन कम्तिमा किनभने बादल-बचत विकल्प मा आफ्नो सुरक्षित खेल खेल्न को या त.
यो एक खेल हो, वा बागवानी-थिम्ड मनन अनुप्रयोग? या त बाटो, यो सबै भन्दा राम्रो कुरा को एक यो वर्ष iOS मा खेल्ने थियो. "रूखहरू एक प्रेम पत्र" को रूपमा यसको विकासकर्ता वर्णन, यो तपाईं कोमल टचस्क्रीन स्वाइपहरूमार्फत तपाइँको बढ्न देख्नुहुन्छ. खेल देखिन्छ र सुन्दर सुनिन्छ: आफ्नो मोबाइल-इनबक्स तनाव गर्न विषको असर रोक्ने औषघि.
1. उनको कथा
एक engrossing खेल भनेर गुप्तचर प्ले गर्न अनुमति दिन्छ, एक महिला जसको पति हराएको भएको छ संग प्रहरी साक्षात्कार को दृश्य भन्दा जाँदै, तपाईं डेटाबेस खोज रूपमा छनकहरू sniffing, र गहिरो र गहिरो प्राप्त, हो, उनको कथा. भयानक "अन्तरक्रियात्मक भिडियो" खेल को सम्झनाहरु को दशक dispel पर्याप्त ठूलो.
त्यसैले, के हामी छुटेका छन्? टिप्पणी खण्ड माथिको खेल मा आफ्नो टिप्पणी र अन्य शीर्षकका लागि आफ्नो सुझावहरु लागि खुला छ - पहिलो पटक मा लागि जारी व्यक्तिहरूलाई 2015, यदि तपाईं आपत्ति छैन.
• को सबै भन्दा राम्रो iPhone र iPad खेल 2014
• को सबै भन्दा राम्रो iPhone र iPad खेल 2013
← चन्द्र रक को नयाँ प्रकारको चिनियाँ चंद्र ल्यान्डर द्वारा पत्ता को सबै भन्दा राम्रो एन्ड्रोइड खेल 2015 →